एक भारतीय ट्याग गरिएको "ब्लग र यात्रा" का ब्लग समाचार - THE INDIAN FACE
चरम पैदल यात्रा: सब भन्दा खतरनाक मार्गहरू
के तपाईं 'ड्र्यागन माउन्टेन' को माध्यम बाट जान चाहानुहुन्छ? वा हुन सक्छ कि पहाडहरूमा यात्रा जहाँ जुरासिक पार्क फिल्म गरिएको थियो? तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि हामी काल्पनिक ठाउँहरूको बारेमा कुरा गरिरहेछौं, तर सत्य यो हो कि यी जस्तो, त्यहाँ मार्गहरूको एक सूची छ। चरम पैदल यात्रा। स्तर द्वारा यसरी Cataloged कठिनाई र पनि ... ती मानिसहरूलाई पार गर्न हिम्मत गर्नेहरूलाई मृत्यु निम्त्याउँदै। र तपाईं, हिम्मत गर्नुहुन्छ?
प्यूर्टो एस्कोन्डिडो, ओअक्सका: मेक्सिकोमा सर्फरको स्वर्ग।
जुन 03, 2021
फेरि हामी एक सब भन्दा प्याराडाइसियल ठाउँहरू प्रविष्ट गर्दछौं जुन अवस्थित छ। छालहरू र स्वतन्त्रता मन पराउने व्यक्तिको रूपमा हामीले अलि-अलि बढी पुग्ने ठाउँको भ्रमण ग that्यौं जुन यसको नामसम्म पुग्छ: मेक्सिकोको प्यूर्टो एस्कोन्डिडो। हामीसँग यस साहसिक कार्यमा सामेल हुनुहोस्, जहाँ हामी तपाईंलाई यो किन प्रेमीहरूको लागि प्रमोदवन मानिन्छ भनेर बताउँछौं सर्फ.
हामी गोता लगाउन इन्डोनेसिया गयौं र योगको लागि पनि रोयौं
हामी इन्डोनेसिया गयौं! हामीसँग आजको पोष्टमा सामेल हुनुहोस् जहाँ हामी तपाईंलाई यो सबै देशका सपनाहरूका स्थानहरूबारे जान्न हाम्रो सबै अनुभव बताउँदछौं। तर अझै राम्रो! हामी तपाईंलाई कसरी सास फेर्न सिकाउँछौं, उहाँ हाम्रो यात्राको नायक बन्नुभयो। पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी डाइभि and र योगको गहिरो सम्बन्ध छ जसले यी दुई खेलहरूको तपाईंको धारणा बदल्छ!
जब हामी माल्दिभ्समा डाइभिंग गर्न गयौं
04 सक्छ, 2021
माल्दिभ्सको पानीको गहिराइमा डुबाउनुहोस्! हामी तपाईंलाई यो अद्भुत गन्तव्य देखाउँदछौं ताकि तपाईं यसलाई पत्ता लगाउने इच्छाले भर्नुहुनेछ। रंग, स्वाद र अद्वितीय अनुभवहरूले भरिएको गन्तव्य। डाइवि practice अभ्यास गर्नका लागि विभिन्न एटोलहरूको यात्रा, जहाँ राम्रोसँग खाने र तपाईंको साहसिक समयमा रहन ठाउँहरू।
स्पेनमा स्केटपार्कहरूको लागि महान गाईड सर्वश्रेष्ठ स्केट पार्कहरू खोज्नुहोस्!
स्केटबोर्डि Spain स्पेनमा एउटा बढ्दो स्थापित अनुशासन हो, र बढ्दो परिष्कृत स्काटरहरूको लागि पार्क निर्माणको वृद्धि मात्र बढिरहेको छ। हामी तल तपाईलाई बताउँछौं जो स्पेनमा सब भन्दा राम्रो स्केटपार्कहरू हुन्। तिनीहरूलाई सम्झना छैन!
एक्लो यात्रा को अनुभव आफ्नो भित्री स्वयं संग कनेक्ट!
एक्लो यात्राले तपाईंलाई आफैसँग सम्पर्क गर्न संसारबाट बिच्छेद गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको ब्याकप्याकिंग आत्मा लिने र यस एकल साहसिक कार्यको बारेमा सोच्नको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने, खेल योजनाहरू र तपाइँले गर्न सक्ने अनुभवहरू र सुरक्षित यात्रा गर्दा COVID-19 मा थाहा पाउनु पर्ने सुझावहरू लिनुहोस्।
साइकल चलाउन जानका लागि great उत्कृष्ट साइकल यात्रा मार्गहरू पाउनुहोस्!
यस गर्मीमा साइकल पर्यटन एक उत्तम गतिविधिहरू मध्ये एक भएको छ! एउटा गतिविधि जुन मनोरञ्जन पर्यटनको साथ उत्तम मनोरन्जनात्मक साइकलको उत्तम संयोजन गर्दछ। के तपाइँ पर्यटन र साइकलिंगको महान प्रेमी हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंको नयाँ साइकल चश्मा लिनुहोस् र हामीसँगै स्पेनमा केही उत्तम साइकल यात्रा मार्गहरू, साथै प्रतीकात्मक शहरहरूले भरिएको, र अपराजेय पहाड र तट दृश्यहरू सँगै सवारी गर्नुहोस्!
क्षेत्र को बारे मा 12 जिज्ञासा polar अन्टार्कटिका बाट
प्रभावशाली सतह र कठोर मौसम स्थितिले अन्टार्कटिकालाई एक क्षेत्र बनायो polarयो पृथ्वीमा सबैभन्दा inhospable छ, तर सबैभन्दा चाखलाग्दो र अध्ययन गरिएको स्थानहरू मध्ये एकमा। यस कारणका लागि, बाट The Indian Face हामी तपाईंलाई केहि रोचक तथ्यहरू भन्न चाहन्छौं!
यो कोलोराडो मा स्कीइ is छ! तपाईको उत्तम स्टेशनहरूको तुलना
हामी यसका लागि उत्साहित छौं स्की मौसम! र जब हामी कोलोराडोको बारेमा सोच्दछौं, यो ठीक छ स्की पहिलो कुरा जुन हाम्रो दिमागलाई पार गर्दछ ... अर्कोसँग संबद्ध गर्न असम्भव! बाहिर लिनुहोस् स्की चश्मा र अविश्वसनीय राहत र प्राकृतिक कटोराको साथ पहाडहरू भरिएको यसको स्टेशनहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्।
विन्डसर्फ र Kitesurf मा Tarifa आफैंलाई हावाको राजधानीबाट टाढा लानुहोस्!
अभ्यासका लागि उत्तम स्थानहरू मध्ये एक windsurf र kitesurf यसमा कुनै श .्का छैन Tarifa, Cádiz प्रान्तमा यो कुनै कुराको लागि हो कि तिनीहरूले उहाँलाई चिन्छन् हावा राजधानी! के तपाईं आफूलाई अन्डालुसियाको सर्वश्रेष्ठबाट टाढा लैजानको लागि तयार हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ समुद्र, हावा र साहसिक प्रेम गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि पढ्नुहोस् र भ्रमणको अनुभव पत्ता लगाउनुहोस् Tarifa, पतंग र विन्डसर्फको अभ्यास गर्न एक आदर्श स्थान!
होइ अन पत्ता लगाउनुहोस्, भियतनामको सबैभन्दा सुन्दर शहर!
यदि तपाईंले भ्रमण गर्नुभएको छैन भने होई ए यो तपाइँको समय हो यो गर्नका लागि! Uना भियतनामको प्रतीकात्मक तटीय शहर र यसको सुन्दरता, इतिहास, संस्कृति र परम्पराको लागि मान्यता प्राप्त। हो ची मिन्ह र राजधानी हनोई बीच आधा बाटोमा अवस्थित होई अन निस्सन्देह देश मा एक धेरै भेटघाट र सुन्दर शहरहरु मध्ये एक हो। पढ्नुहोस् र हामीसँग पत्ता लगाउनुहोस् किन यसलाई भियतनामको सब भन्दा ठूलो खजाना मानिन्छ!
हडसन यार्ड न्यूयोर्कमा विशेष नयाँ पड़ोस!
यदि यो तपाइँको पहिलो पटक भ्रमण छैन न्यूयर्क तपाईं पछाडि फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो महान शहर हालका वर्षहरूको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी निर्माणहरूमध्ये एक हो: हडसन यार्डहरू। पढ्नुहोस् र NYC को सबैभन्दा नयाँ र सबैभन्दा विलासी छरछिमको जस्तो देखिन्छ को बारे मा अधिक जान्नुहोस्!
भोलारिका भोलकोनो चढ्ने अनुभव
ध्यान, साहसिक पर्यटन प्रेमीहरू! हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूलाई नयाँ ठाउँहरू जान्न र अविस्मरणीय अनुभवहरू बन्न मनपर्छ जुन उनीहरूको जीवन चरममा पुर्‍याउँछन्। यस पटक हामी विश्वभरका साहसीहरू र पर्यटकहरू सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको गन्तव्यहरू मध्ये एकतिर लागिरहेका छौं: Villarrica ज्वालामुखी! चिलीको सबैभन्दा प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी क्रेटर आरोहणको अनुभव पत्ता लगाउनुहोस्।
यो सिड्नी-वोलोनong्ग (अष्ट्रेलिया) मा स्काइडाइभिiving हो।
प्याराशूटको सब भन्दा राम्रो ठाउँ मध्ये एक निस्सन्देह अष्ट्रेलिया हो। के तपाई चरम खेल र साहसिक प्रेम गर्नुहुन्छ? को अनुभव पत्ता लगाउनुहोस् सिड्नीमा स्काइडाइभि go - Wollongong!
फ़िरोज़ा तटमा स्वर्गीय अनुभव
यदि तपाईं अन्वेषण, प्याराडिजियल बिच र उत्तम छुट्टिहरूको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो जानकारी तपाईंको लागि हो। टर्की रिभिएरामा टुरोइज कोस्टको आश्चर्यकर्महरू खोज्नुहोस्!
मल्लोर्का टापुको एउटा बेलुनमा उडान गर्दै
तातो हवाको बेलुनमा मल्लोर्का माथि उडान व्यावहारिक रूपमा स्प्यानिश बेलारिक टापुमा परम्परा बन्यो। एक सम्पूर्ण अनुभव जुन यस भव्य सवारीमा विश्वमा उडान उडान स्वर्गको स्वाद लिन हजारौं साहसीहरू लिन्छ।
मलेशियामा ल्याk्कवी टापु
अंडमान सागरको दूरीको बीचबाट उदय भएर हामी यसका सबै पन्नाको वैभवमा विश्वको सब भन्दा विदेशी प्याराडाइजहरू भेट्टाउँछौं: ला Langकावई, १०104 टापुहरू मिलेर बनेको अद्भुत द्वीपसमूह।
नाजिरमा सर्फ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो छालहरूको राजधानी।
एक समुद्री तटमा रहेको शहर जुन शान्त र शान्त हो भनिन्छ तर यसको प्रकृतिमा एक जंगली महासागर छ जुन सर्फिंगको लागि विशेष डिजाइन गरिएको छ जस्तो देखिन्छ।
हेलसिंकी अन्वेषण: फिनल्याण्ड मा साहसिक, संस्कृति र विश्राम!
बाल्टिकको किनारमा बसालिएको यो विश्वकोष शहर एकदम शान्त र ज्ञान र ज्ञानले भरिएको छ। केन्द्र र हेल्सिंकीको सबै कुनामा इतिहास, वास्तुशिल्प समृद्धि र डिजाइनको प्रेरणा दिन्छ, जसले हरेक पर्यटकलाई चकित पार्छ
एल्क्वी उपत्यका: चिलीको यात्रा जुन तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्न!
कोक्वीम्बो क्षेत्रमा अवस्थित छ, ला सेरेनाको पश्चिममा, हामी एल्की भ्याली भेट्दछौं, सम्पूर्ण देशको सब भन्दा सुन्दर र आकर्षक प्राकृतिक स्थानहरू मध्ये एक, र दक्षिण अमेरिकामा पनि।
पर्वतारोही समाज - अनुभव र प्रतिष्ठा बाट - यो धेरै राम्ररी जान्दछ ... योसेमाइटमा चढाई आश्चर्यजनक छ! यो स्थान यो विश्वका सर्वश्रेष्ठ चट्टान पर्वतारोहीहरूको लागि मक्का मानिन्छ, र यो क्यालिफोर्नियाको राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्खालहरू उनीहरूको भण्डारमा समावेश गर्ने निर्णय गर्नु धेरैको लागि प्रशंसनीय चुनौती हो।